Starkvind waa qaacidada IKEA ee dib u cusboonaysiinta hawada sifeeyaasha | Warka Gadget
IKEA waxay si adag uga shaqaynaysaa sidii ay u hirgalin lahayd alaabooyinka kala duwan ee ka koobnaan kara "automation-ka guriga aasaasiga ah" ee guriga caadiga ah. Caddaynta tani waa wada-shaqeynta aan la tirin karin ee Sonos ee aan awoodnay inaan dib u eegis ku sameyno hore, iyo sidoo kale nuqulkoodii ugu horreeyay ee nadiifiyaha hawada la heli karo oo aan sidoo kale tijaabinay.
Hadda waa waqtigii la sifayn lahaa alaabta, taasina waxay ahayd fikradda ugu weyn ee cusub Starkvind, nadiifiye hawo miiska dushiisa ah oo badan oo leh astaamo la mid ah. Nala joog oo ogow waxa uu ka kooban yahay nadiifiyaha hawada ee gaarka ah ee IKEA kaas oo ka dhigaya summadaha kale inay ku gariiraan suuqan.
1 Alaabta iyo naqshadeynta: Way adkaan doontaa in la ogaado inay tahay nadiifiye
2 Isku-xidhka iyo qaabaynta
3 Awoodaha nadiifinta iyo sifooyinka farsamada
Alaabta iyo naqshadeynta: Way adkaan doontaa in la ogaado inay tahay nadiifiye
Cinwaanka qaybtan naqshadeynta ayaa ah soo koobida ugu fiican ee qalabka iyo waxa aan u maleynayo, marka laga eego aragtidayda is-hoosaysiinta, waa si sax ah barta ugu habboon. Way adag tahay in la ogaado waxa cadaabta ah haddii aysan kuu sheegin, taasina waa wanaagsan tahay, sababtoo ah asal ahaan waa miis. Sida aynu sheegnay, miis awood u leh inuu hawada nadiifiyo oo leh nidaamka IKEA ee caadiga ah ee aad jeceshahay, ama nacayb. Waxaan bartay cashar qiimo leh markii aan qalabeeyay gurigayga, had iyo jeer waa inaad soo iibsataa qalabka korontada ee IKEA, waxaad heli doontaa caafimaad iyo waqti.
Midabada: Madow Brown / White Oak
Qaybaha: Iyada oo miis isku dhafan / In qaab shakhsi
Cabirka: 54 x 55 sentimitir
Laakiin yeynaan ka leexan oo aan sii wadno hadalka ku saabsan Starkvind, nadiifiyaha IKEA in kasta oo uu ku jiro moodelkeeda 149 euro wuxuu noqon karaa miis dhinaceed 54 x 55 cm ah, Waxaan sidoo kale ka iibsan karnaa nooca 99 euro, kaas oo xaddidaya inuu noqdo nadiifiye si caddaalad ah u weyn oo leh cag bir ah oo caadi ah qaabka moodeelkii hore. Xadhkaha mitirka 1,50 waxa lagu daraa mid ka mid ah lugaha (ku xisaabtan marka aad dhigayso) oo si fiican ugu dhex milmay agagaarka, si kastaba ha ahaatee, tani waxay xaddidaysaa sababo cad oo ah goobta miiska, taas oo la doorbidayo in la dhigo meel u dhow a gidaarka, ama fadhiga fadhiga si aanu u yeelan xadhig khatar ah oo hareeraha ka laadlaadsan.
Isku-xidhka iyo qaabaynta
Kordhintani waxay ku xirnaan doontaa wax badan isticmaalaha iyo shakhsiyadiisa. Waxay igu qaadatay 10 daqiiqo oo kaliya inaan dhamaystiro 13 tillaabo. Jadwalku waxa uu leeyahay sideed boolal oo ay ku jiraan furaha Allen iyo daboolka qaabaysan, inta soo hartay ayaa ah wax badan oo ah shaqada isku-ururinta sifeeyaha sida meelaynta filtarrada iyo fiilooyinka.
Sida qaabeynta, fudud. Shaandheeyaha ugu horreeya waa la soo ururiyey laakiin wuxuu ku jiraa boorso, markaa waa inaan galnaa qolka oo aan bixinno. Marka aan tan sameyno, waxaan dhignaa shaandhada nadiifinta gaaska labaad oo aad si gaar ah uga iibsan karto € 16 (ku habboon urta).
Hadda waa waqtigii laga faa'iidaysan lahaa sifooyinkeeda otomaatiga ah ee guriga. Starkvind Tani waxay leedahay isku xidhka nidaamka IKEA Tradfri, si aanu uga shaqayn karno IKEA Home Smart codsiga. Looma baahna in la yiraahdo, "buundo" Tradfri Aad bay lagama maarmaan u tahay arrintan. Waxaan si fudud u raacnaa tillaabooyinka soo socda:
Waxaan furnaa codsiga oo aan dooranaa qalabka
Waxaan riixnaa badhanka lammaanaynta marka la codsado
Si toos ah ugu xidhma
Hadda waa inaan ku dhex darnaa Apple's HomeKit ama Amazon's Alexa oo aan ku raaxaysanno. Tani waa, habka, alaabtii ugu horreysay ee IKEA Tradfri si ay u isticmaasho nidaamka isku-dhafka tooska ah ee habkan, waana wax lagu mahadiyo.
Awoodaha nadiifinta iyo sifooyinka farsamada
Waxaan ku bilaabeynaa sifooyinka farsamada ee aasaasiga ah, qalabkani wuxuu kaloo leeyahay qaab «automatic» ah oo leh shan awoodood oo gacanta ah oo soo saari doona qaylo gaar ah iyadoo ku xiran awoodda nadiifinta:
Nivå 1: 24 db ee 50 m3
Nivå 2: 31 db ee 110 m3
Nivå 3: 42 db ee 180 m3
Nivå 4: 50 db ee 240 m3
Nivå 5: 53 db ee 260 m3
Sidee bay noqon kartaa haddii kale, isticmaalka korontada sidoo kale waxay u kordhin doontaa si tartiib tartiib ah, inta u dhaxaysa 3W qaabka ugu yar iyo 33W qaabka ugu badan. Sidaa si la mid ah, waxaynu u haynaa xubno taxane ah oo ay tahay inaynu ilaalino.
Sifee hore: Nadiifinta laba ilaa afar toddobaad
Dareemka tayada hawada: 6 bilood kasta
Shaandheynta qaybeed: Beddel 6dii biloodba mar
filter gaaska: Beddel 6dii biloodba mar
Qaab toos ah Dhanka kale, waxay dooran doontaa xawaaraha marawaxadaha iyadoo loo eegayo tayada hawada iyadoo ay uga mahadcelinayso mitirka qaybta PM 2,5. Si aad u bedesho filtarka marka digniintu ka soo muuqato guddiga kontoroolka, waa in aan riixnaa batoonka «dib u habeyn» ee gudaha ku yaal, ugu yaraan saddex ilbiriqsi ilaa tusiyuhu ka baxo.
Sidaan sheegnay, filtarka caadiga ah waxaa loo isticmaalaa in laga saaro boodhka, manka iyo xasaasiyada kale ee hawadu qaado (PM 2,5). Dhankeeda, filtarka gaasku wuxuu noo ogolaanayaa inaan baabi'inno qiiqa, gaasta iyo gaar ahaan urta, qalab gaar ah oo si gaar ah loo iibiyo iyo in aragtidayda ay lagama maarmaan tahay. Waa hagaag, la'aanteed waxaa nalaga reebay mid ka mid ah sifooyinka si sax ah aniga ii ah kuwa ugu xiisaha badan ee nadiifiyeyaashaas, kuwa urta. Waqtiyada qabowga waxaa xiiso leh in la awoodo in la "hawo-qaado" guriga iyada oo aan la furin wax daaqado ah, subax wanaagsan iyo ur nadiif ah oo aan la qiyaasi karin ayaa la ogaaday.
Faa'iido ahaan, waxaan leenahay naqshad kaliya IKEA waxa uu awooday in uu bixiyo ilaa hadda taasina waxay naga xoraynaysaa in aan xaq u leenahay meelaynta nadiifiyaha, taas oo marar badan sabab u ah in aan iska ilaalino imaatinka guriga. Hadda waa inaan ku bedelnaa mid ka mid ah miisaskayada dhinaca Starkvind waxaanan haysanaa laba-in-mid. Naqshadani waxay si gaar ah ula shaqeysaa guryaha lagu qurxiyey walxaha IKEA, laakiin waa dhexdhexaad, Iskuma dhici doonaan inta badan deegaanka waxayna ka dhigaan mid ku habboon xitaa xafiisyada.
Heerka qanacsanaanta waxaan helnay waxqabad wanaagsan labadaba marka la eego nadiifinta hawada iyo baabi'inta urta, oo ay weheliso is-dhexgalka buuxda ee inta kale ee walxaha automation-ka guriga iyo xitaa IKEA lafteeda sida indhoole caqli badan in aan hore u tijaabinay. Halkaa marka ay marayso, Starkvind ee 159 euro waxay aniga ila tahay mid kale oo aan tixgelin karo.
La-qabsiga qalabaynta guriga
Awoodaha nadiifinta iyo fududaanta
Waxay u baahan tahay buundada Tradfri
Nooca aan lahayn miis maaha mid soo jiidasho leh
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Reviews » Starkvind waa qaacidada IKEA ee dib u cusboonaysiinta hawada sifeeyaasha [Falanqaynta]